Shirri OPDOn biyya diiguuf qopheeffate(ATM) Neftegnas! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsShirri OPDOn biyya diiguuf qopheeffate(ATM) Neftegnas!
Shirri OPDOn biyya diiguuf qopheeffate(ATM) Neftegnas!
Shirri OPDOn biyya diiguuf qopheeffate
(ATM) Neftegnas! Wake up Oromoo!
Via Dabessa Gemelal, Muddee 29, 2018
Ilmoo dabaafi abaarsaa kan taate OPDOn biyya diiguuf maraachaa jirti. Akka saree maraatuu fi bineensa waranamee wan argatte hunda ciniinutti kaateetti. Shirri xaxxu hundi jalaa fashalaa’aa jira.
1. Olola FB irratti gaggeeffamuuf Team Leader dhaabuun qoqqoodinsa uummata Oromoo naannoon akka uumamu gochuu. Hanga yoonaatti namoota team leader FB ta’uun ji’aan qarshii 4,500 fi durgoon hojjechaa jiran afur irra geenyee jirra. Maqaa isaanii ni saaxilla.
2. Hiriira ABO balaalleffatu qindeessaa turte. Xiyyeeffannoon bakka hiriira kanaa immoo ABMBOO dha. Gudar irratti TEST ta’us kufee jira
3. Daangaa GEEDOO gubbaatti uummata Wallagaa irratti namoota maallaqaan bituun cufsiisuun, waldhabdee ummata Oromoo gidduutti uumuu. Kana kan qindeessuuf yaalii gochaa ture Milkeessaa Miidhagaa akka ta’e dubbatamus shirri kun fashalaa’ee jira.
4. Abbootii Qabeenyaa Oromoo addaan baasuun olola irratti gaggeessuu yeroo ta’u Abbaa qabeenya Hootela Ilillii Gamshuu Bayyanaa irratti jalqabamee jira.
Guyyaa kaleessaa ololtuu FB OPDOn bobbaaste keessaa tokko maqaa#Hana_Regasa jedhamtuun fayyadamuun barreffamnni maqa ballessiin fuula FB irratti dhoobameera. Niitiin kun Afaan Oromoo barreesuus ta’e dubbachuu hin dandeessu.
Barreeffamni maqa balleessii kaanimmoo account FB maqaa #OBN_Oromia_Bloggers_Network jedhamu kan Addisuu Araggaa ta’uu beekameera. Addissuu Araggaa nama Account FB baay’ee qabuu fi FB Ifa Baas kan jedhamu karaa nama #Ifabaas Abbaa kubbaniyaa Advertising tokkoon al kallattiin oofamu qaba.
Barrefama olola Gamshuu irratti gaggeeffamu kana kan qopheesse nama Guddataa Galaalchaa jedhamu yeroo ta’u Hana Regasatti kan laate Taayyee Danda’aa ta’uu baramee jira.
AMBOO: Dilbata boriitti OPDOn uummata Amboo hiriira degersaa waamaa jirti! – https://t.co/XHrc814MMh pic.twitter.com/eJYT5ea6Z4
— Kichuu (@kichuu24) December 29, 2018
Waliigaltee fi waldhabbii ABO fi ODP/mootummaa Itiyoophiyaa
“waraabessi biyya hin beekne dhaqee itillee naa Afaa” jedhe.Tolasaa Tasfaayee eenyu?
Endale Nigussie says:
Barreeffamni kunuyyuu shira warra dabduuti. Dharri keessan kan OPDO oli malee gadii miti. Aangoodhaaf jecha summii diddigdu. Isin haa diddigsu! Maal taatu yoo waan gaarii fi nageenya yaaddan? Akka uummatni itti jiraatu hin beektan. Kanaaf geemii irratti taphachuu feetqn. Waaqni Oromtichaa isin hin milkeessin! Waaqayyo jal’isee isin haa hambisu.